Kunyakaza iNingizimu Afrika ngomthelela weCOVID-19 nangomnotho wamazwe ezikhishwe - Bayede News
Izigameko ezenzeka kamuva emhlabeni wonke jikelele zibonakala zingabikezelanga. Namuhla sibona isifo esingumbhedukane sesidlangile sasabalala namazwe cishe angaphezu kwekhulu. Maduze nje, lesi sifo iCOVID -19 sizobe sesigimbicele umhlaba wonke. Nelengabadi selisihabulile lesi sifo, nsukuzonke silokhu sibikelwa ngokuthi ndawana thizeni, sesandile isibalo sabantu abanalesi sifo. Phakathi kwalesi sijwi, makhathaleni umhlaba usuphinde wehlelwa isigameko ebesilokhu silokozela ekudeni. Lesi yisimo sokungqubuzana okukhulu phakathi kwamazwe ahamba phambili ngomnotho wezika woyela. La mazwe yiRussia neSaudi Arabia okuthe ngenxa yokungaboni ngasolinye ezivumelwaneni zokuxoxisana maqondana nokulawulwa kukawoyela abe esedebezana amakhanda, kwathi ngenxa yalesi senzo, umhlaba wonke wezezimali nezimakethe wadunguzela.
Kuzokhumbuleka ukuthi amazwe ayizikhondlakhondla okuyiwona kahle hle alawula ukuhweba emhlabeni jikelele amazwe anowoyela, abizwa ngokuthi i-OPEC. Njalo ngonyaka nasemuva kweminyaka ethile, ahlala phansi axoxisane aphinde avumelane ukuthi azoyilawula kanjani intengo kawoyela emhlabeni. Ekwenzeni kwawo lokhu, asuke ezibheke wona ukuthi azozuza kangakanani futhi azolawula kanjani intengo yazo zonke izinto emhlabeni njengalokhu esebenza ngesingakubiza ngokuthi ondlovukayiphikiswa. Ngebhadi kulokhu, esivumelwaneni asisayinda eminyakeni embalwa edlule, futhi esiphelayo ekupheleni kukaMbasa kophezulu, sekube khona ukungavumelani nxa eliholayo iSaudi Arabia lincenga ozakwabo ukuthi banqamule umkhiqizo ukuze benyuse amanani entengo yomphongolo kawoyela ebonakala intenga kulezi zinsuku.
Phakathi kwala mazwe, elaseRussia nalo eliwubhongoza lisishaye indiva isihlongozo seSaudi Arabia. Emveni kwalokhu, iNkosana yamaSaudi Arabia, ibisikhuphula ngesikhulu isibalo umkhiqizo kawoyela wakuleliya lizwe, maqede kwehla intengo kawoyela emhlabeni yafinyelela ema-$32. Lesi senzo sihlangatshezwe elaseRussia nalo elenyuse owalo umkhiqizo maqede asabisa ngokulandela amanye amazwe afana neNigeria ne-Iraq. Okungase kwenzeke ukuthi uma kungafinyelelwa kulezi zivumelwano uma kuphela uMbasa, kuzobe kungokokuqala ngqa ukuthi lamazwe e-OPEC azikhiqizele uwoyela wamazwe awo ngaphandle kwezivumelwano. Lokhu kungadala udungunyane olukhulu emhlabeni kwazise izimboni nxa zishaya izibalo zemikhiqizo yezinkampani zazo, ziye zibheke kabanzi ukuthi amanani kawoyela ami kanjani, futhi azoma kanjani kuya phambili.
Impi elwa buthule eyozomnotho
Okunye futhi okungalethwa yilesi sigameko, ukuzuza kakhulu kwabantu emhlabeni mayelana nempi yezomnotho yala mazwe. Njengoba kwenzeka lokhu, sesibonile amanani kawoyela ehle ngale ndlela yokuthi singase sibone ukwehla kwentengo kaphethroli eNingizimu Afrika ngenyanga ezayo, cishe ngenani elingaphezulu kwerandi. Ukubuyela egciwaneni iCoronavirus, singake sibheke ukuthi i-USA neChina ami kanjani. Kunesisho esithi nxa i-USA ingenwa umkhuhlane umhlaba wonke uyathimula. Kamuva sibona kuguquka izinto kwazise iChina nxa ithimula umhlaba wonke ungenwa igciwane. Ngale kokuthi abantu baxhumene emhlabeni, esingakusho ukuthi la mazwe amabili ngokulandelana kwawo, yiwona ayizikhondlakhondla emhlabeni. Cishe ingxenye yomnotho womhlaba iphethwe yila mazwe, lokhu okwenza ukuthi nanoma ngayini eyenzeka kuwona, kungabe uyawathanda noma awuwathandi, uyathinteka ngokwenzeka kuwona. Uma singake sibheke izinkomba zakamuva zala mazwe ngokwezinombolo zezomkhiqizo othalakala kuwona, sibheka ukuthi, emkhiqizweni obizwa ngokuthi yiPurchasing Power Parity (PPP) iChina inemba kosigidintathu abangama-$27.3 uma uqhathanisa ne- USA elinosigidintathu abangama-$21.4.
Okanti uma sibheka amandla omnotho walokho okukhiqizwa ngaphakathi kwala mazwe esigabeni esibizwa ngeGross Domestic Product (GDP), iChina ikhiqiza osigidintathu abali-$14.14 kanti i-USA yona yenza osigidintathu abangama-$21.44. Ukuqhathanisa zombili lezi zinkomba kusho ukuthi iChina seyihamba phambili ngomnotho wamandla emali elinayo wokukwazi ukuthenga izimpahla ngokuqhathaniswa, iPPP, kanti i-USA isahamba phambili ngokwezinkomba zeGDP. Ukuthikamezeka kwale minotho yomibili emhlabeni, kusho ukuphazamiseka kwawo wonke umhlaba, ikakhulukazi amazwe afana neNingizimu Afrika, njengoba liyizwe elincike kakhulu ekudayiseni imikhiziqo ngaphandle, futhi lincike kakhulu ngamaxhama okuxhumana ngezomnotho phakathi kokunye, ezweni iChina ngokutshalwa kwezimali. Izimboni ezifana nezezimoto, ithekhnoloji, ezokuvakasha, imikhiqizo eyahlukahlukene kuzothinteka kakhulu okuzodala isimo sibe mazonzo kwazise leli lisatabalasa kakhulu nangezinto ezifana nokuntengantenga kwamandla kagesi njalonjalo. Nanoma ngabe yini eshiwoyo, lesi simo sizoletha ukuhlelembeka kabusha kwezomnotho emhalbeni jikelele.
nguGugulethu Xaba Mar 13, 2020